(XOG XASAASI AH) Mid kamida ah wasiiraddii Puntland oo goostay, faafiyayna xog xasaasi ah oo aysan dowladdu shaacin iyo madaxeyne Gaas oo xanaaqay…………. – Puntland News
Home 2017 September 13 Somali News (XOG XASAASI AH) Mid kamida ah wasiiraddii Puntland oo goostay, faafiyayna xog xasaasi ah oo aysan dowladdu shaacin iyo madaxeyne Gaas oo xanaaqay………….
(XOG XASAASI AH) Mid kamida ah wasiiraddii Puntland oo goostay, faafiyayna xog xasaasi ah oo aysan dowladdu shaacin iyo madaxeyne Gaas oo xanaaqay………….
Wasiir udowlaha madaxtooyada Puntland ee xiriirka gobolada, Bashiir Cabdiraxmaan Gurxan ayaa loo maleynayaa inuu isaga tagay shaqadiisii, oo Xamar shaqo u raadsaday, sida ay sheegayaan xogo aan helayno.
Wasiir udowlaha ayaa sidoo kal faraha la galay howl aan isaga qusayn isagoo ka hadlay oo sheegay inay Puntland taageersan tahay go’aankii lagu dhiibay Cabdikariin Qalbi Dhagax.
Cabdiraxmaan Bashiir Gurxan oo muddo 20 cisho ah ku sugan Muqdisho, ayaa Warar lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan inuusan dib ugusoo laabandoonin Puntland, isagoo saluugsan in laga magacaabay wasiir udowlaha madaxtooyada iyo xiriirka, oo aad moodid inay shaqo ahaan aad isugu dhow yihiin.
Wararka qaar waxay sheegayaan inuu shaqo udoontay dowladda federalka Soomaaliya.
Ilo madaxtooyada ku sugan ayaa Puntalndnews u sheegay in madaxweyne Gaas uu aad uga carrooday hadalka masuulkaan kasoo yeeray, isagoo ka hor dhacay mowqifka dowladda.
Masuulkaan ayaa horey loogu haystay arrin xasaasi ahayd oo uu ka hor dhacay, taasoo ahayd mowqifkii Iiran xidhiidka loogu jaray, balse isagu waa uu difaacay Iiran, laakiin madaxweyne Gaas oo maalmo kadib safar dibada ah kasoo laabtay shaaciyay inay Iran xidhiidka u jareen, hadalka wasiirkana uu yahay mid isaga ku gaar ah.